Otu esi emeghe HTC bootloader gị site na iji HTCdev | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | HTC, Nkuzi
Mepee bootloader nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụ ọgụgụ HTC, bụ ikuku na weebụsaịtị HTCdev.
HTCdev bụ ngwa dị n'ịntanetị, nke ga - enyere anyị aka ịtọhapụ bootloader nke anyị HTC, inwe ike ịhọrọ site n'ọtụtụ ngwaọrụ dakọtara n'etiti otu ndepụta na-arịwanye elu.
Ọzọ, m ga - eduzi gị na usoro ị ga - agbaso na ibe weebụ a edeburu aha, yana nsonaazụ ikpeazụ nke nbudata ngwaọrụ dị mkpa akpọchi bootloader nke ọnụ ọnụ ahọrọ.
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịbanye websaịtị HTCdev ma denye aha, ozugbo e debanyere aha ha ga-ezitere anyị email na a njikọ nkwenye, nke anyị ga-pịa rụọ ọrụ anyị ndebanye.
Ozugbo arụ ọrụ ndebanye aha ahụ, anyị ga-abanyeghachi na ya HTVdev webụsaịtị na anyị ga-mata onwe anyị iji anyị aha njirimara na paswọọdụOzugbo emere nke a, anyị nwere ike ịmalite site na ntuziaka onye ọrụ maka ibe weebụ a.
otú iji HTCdev nzọụkwụ site nzọụkwụ
Site na peeji nke HTCdev, anyị ga-ahọrọ nhọrọ m kara akara na nwa, Kpọghe Bootloader, anyị ga-ahụ ihuenyo dị ka nke m na-agbakwunye n'okpuru.
Na ihuenyo ọhụrụ a, anyị ga-ahọrọ nhọrọ malite, nke dị n'ime bọtịnụ oval na-acha akwụkwọ ndụ.
Na ihuenyo ọhụrụ a, anyị ga-pịa akụ Họrọ Ngwaọrụ gị nke mere na a ga-enwe a gbadaa menu site na nke anyị nwere ike ịhọrọ ihe nlereanya anyị nke HTC.
Ọ bụrụ na anyị nlereanya na-agaghị ahụ na dobe ala ndepụta, nke a ga-apụta na usoro nke HTCdev ọ dakọtara na ọnụ anyị n'oge a.
Ozugbo anyị họpụtara ọnụ anyị, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ Amalite Kpọghe Bootloader, mgbe ahụ ka ọ ga-egosi anyị a ịdọ aka ná ntị na ihuenyo nke na-adọ anyị aka ná ntị banyere nsonaazụ nke ịkpọghe bootloader nke anyị HTC.
Anyị ga-akara akara igbe nlele abụọ ịnabata ọkwa ahụ, wee pịa bọtịnụ dị n’okpuru.
Na peeji na-esonụ, HTCdev, ga-agwa anyị n'ime igbe dị n'aka nri, nke mmemme anyị ga-arụnye nke mere na akpọchi ngwá ọrụ anyị na-aga ibudata na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Ngwaọrụ bụ Gam akporo SDK, nke Oge Java Oge Oge na HTC mmekọrịtaỌ bụrụ na ịnweghị ha arụnyere, ị ga-etinye ha tupu ịga n'ihu na usoro nbudata nke bootloader unlocking tool.
Ngwaọrụ peeji nke na Bootloader budata na HTCdev
Ozugbo arụnyere ihe niile, anyị nwere ike ịga n'ihu unkpọghe ngwá ọrụ download usoroIji mee nke a, na ndepụta ọhụrụ nke ga-egosi n'okpuru, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ download nke ahụ kachasị mma maka ọdụ anyị ahọrọla.
Họrọ nbudata dị ka ihe nlereanya na HTCdev
Họrọ ihe atụ iji budata ngwa ọrụ
Ozugbo ahọpụtara ihe nlereanya na ndepụta ahụ na pịrị na bọtịnụ ibudata, faịlụ ahụ ga-amalite budata na akpaghị aka, anyị ga-echere ka ọ gwụ ma gaa n'ihu ime ya, na-enye gị ikikere ma ọ bụrụ na ị rịọ ha.
Ozugbo emechara faịlụ ebudatara kwekọrọ, windo dị ka nke a ga-apụta:
Ugbu a anyị ga-akara akara n'igbe anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ Osote.
Na-esote na ihuenyo, usoro ihe omume na-adọ aka ná ntị anyị na anyị nwere jikọọ na ngwaọrụ site na eriri na kọmputa, ọ na-enyekwa anyị ihe ngosi nke mere na ka anyị zere ike ọ bụla n'oge usoro mmeghe, na-adụ anyị ọdụ na anyị ekwesịghị imetụ ihe ọ bụla aka n'oge a, yana anyị kwesịrị gbochie kọmputa anyị ịrahụ ụra ma ọ bụ guzoro n'akụkụ.
Tupu ijikọ ngwaọrụ anyị, anyị ga-elele site na ntọala menu nke otu, na anyị arụ ọrụ nke ọma nhọrọ nke USB debugging nke ahụ dị n'ime menu. ntọala, ngwa, mmepe.
Ozugbo ihe niile a na-kwupụtara, anyị ga-ahụ na anyị HTC nwere ihe karịrị 30% batrị, anyị ga-akara akara na igbe nke bootloader akpọchi usoro, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ Osote.
Anyị ga-enweta ihuenyo na-achọ njikọ na ọnụ, mgbe ahụ a nwụnye ọganihu ihuenyo, na n'ikpeazụ a na ihuenyo na ga-agwa anyị na ihe niile e zuru okè, nke anyị ga-ahọrọ nhọrọ Ụzọ ọpụpụ.
Na nke a ugbua anyị ga-enwe bootloader nke HTC anyị terminal agbachi, mara ma na ngwaọrụ gị bụ otu n'ime ndị dakọtara ndị, ị dị nnọọ ga-aga site na website nke HTCdev ma lelee ya na ndepụta sara mbara nke ngwaọrụ dakọtara na ha.
Ozi ndị ọzọ - New HTC Ville C, ụdị akụ na ụba nke Onye S
Isi mmalite - HTCdev
Foto - HTCdev
Nbudata - Gam akporo SDK, Oge Java Oge Oge, HTC mmekọrịta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Etu ị ga-esi kpọghee bootloader nke ọnụ ọgụgụ dị mma nke HTC na HTCDev
Ndewo, ị nwere ike ịgwa m gịnị bụ mmemme a?
Zaghachi Rafa Indi
N'ihi na nzọụkwụ nke na nbudata na unkpọghe ngwá ọrụ m ọnụ; Kedu ka m ga-esi mara ụdị nke m ga-ebudata?
Zaghachi Juan Carlos G
Ozugbo inwetara weebụsaịtị HTCdev,
ị denye aha ma họrọ ọnụ gị,
na ikpeazụ nzọụkwụ ị na-a ndepụta
na ihe nlereanya nke ọnụ gị na
nsụgharị niile dị ugbu a.
Tngo ekwentị ekpochi site na onye ọrụ oroma, enwere m ike ịme ihe iji wepu mkpọchi io ịtinye gam akporo na 0? Ọ bụ ọchịchọ htc na m nwere ike ịza biko
Zaghachi Abdedaim El Achhab El Kheffa
Ndewo, agbasoro m usoro niile, mana emegheghị m ya. Mgbe emechara m tinye nke a: (anaghị akwado ụdị ROM gị, mana a ga-enwe ụbọchị ọ ga-akwado ya. You ga-enweta ọkwa iji melite ekwentị na akara Rome kachasị ọhụrụ. imelite hboot iji kpọghee ekwentị Anyị na-arịọ mgbaghara maka nsogbu ahụ.
Ndewo nụ ụtụtụ ọma, ọ dakwo m otu ihe ahụ dị ka gị onwe gị. Olee otú unu si dozie ya? Ugwu A3333.
Ndewo, enwere m obi abụọ,
Ana m ele ndepụta ahụ, ebe ọ bụ na emelitere m ụdị nke ngwanrọ ahụ, ọ na-enye m nọmba, ọ bụ nke ahụ ka m ga-elele na ndepụta ahụ wee budata?
Zaghachi Sandra Petita
Leo 96xd dijo
ọ na-arụ ọrụ maka sony ericcson ndụ wt19 ??
Ndewo, enwere m ọchịchọ htc c, kedu ka m ga esi mara rom nke m ga-ewere ???
Zaghachi na atyka
Ndewo, enwere m HTC cobalt model PG05100. Enweghị m ike ịchọta ihe nlereanya ahụ na ndepụta HTCdev. Nke a ọ pụtara na enweghị ike ịkpọghe ya?
Onye Kraịst dgz dijo
kedu ka m ga-esi budata ruu maka htc exporer
Zaghachi christian dgz
Hey, ọ bụrụ na m si Mexico, ihe nlereanya ahụ dara ngwụrọ, ọ naghị enyere aka, enwere m olileanya.
Esi m Mexico, amaghị m ma ọ bụrụ na ị mepee bootloader, email m 666black @@ Hotmail.es
Ndewo, ana m abanye na 12 ma site ebe ahụ anaghị m agafe, m na-edepụta nke a na enweghị ihe ọ bụla flashboot flash site na unlocktoken Unlock_code.bin.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụ ebee ka mperi ahụ, daalụ
Ndewo, mgbe m batara 9 nke nnomi "fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin", enwetara m njehie. Mgbe ahụ, ana m ahapụ otu mpempe akwụkwọ nke ihe m hụrụ
na-ede 'unlocktoken' ...
EMEJU (ime obodo: imepe akara elele adighi nma)
Emechara. oge niile: 0.230s
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere azịza ya, biko biputere ya.
n'agbanyeghị, m cell bụ a htc onye x nke mbụ (4 cores na tegra3)
Emebeghi folda ahụ, gịnị ga-abụ njehie ahụ?
nke ahụ abụghị akpọchi bootloader !!! bụ ịwụnye nsụgharị nke ROM iji nwee ike ịmeghe ya mgbe e mesịrị ... lezienụ anya maka ndị charlatans a!
hello M jisiri ike ịhapụ ọchịchọ htc ọ pụta unlocked na menu zoro ezo mana ọ ka na-agwa m network egbochi kedu ihe m nwere ike ịme
Ndewo ... Achọrọ m enyemaka biko ... Ana m egbochi bootloader nke htc one m7 m na mberede, m na-anwa imepe ya na htcdev mana na njedebe mgbe m zipụrụ ya enwere m ahụhụ na amaghị m ihe ọzọ m ga-eme ...
Ana m anwa ịgbanye ekwentị mana ọ na-eziga m mgbe niile ka m reboot mode, ọ naghị ekwe ka m mee ihe ọ bụla ,,, ọ na-etinye m *** RELOCKED ***
*** ịdọ aka ná ntị nche *** Biko gwa m ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ngwọta na ihe m ga - eme ...
Tupu i meela, ị ga-ekele gị nke ukwuu ..